Xog: Deni oo niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada Jubaland iyo Puntland ee BF - Caasimada Online
Home Warar Xog: Deni oo niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada Jubaland iyo Puntland...
Xog: Deni oo niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada Jubaland iyo Puntland ee BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay maamulka goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, ee uu sida weyn isugu haleynayey.
Inkasta oo kulanka ay ka qeyb-galeen kaliya 33 xildhibaan, haddana waxaa xitaa hubneyn inay 33-kaas ay wada taageersan yihiin Deni, ayada oo qaarkood ay suurta-gal tahay inay qadada u tageen kaliya inay ku ixtiraamaan casuumadda loo fidiyey.
Xildhibaanada diiday inay kasoo qeyb galaan qado sharafta uu sameeyey Saciid Deni ayaa la sheegay inay ku kala biireen siyaasiyiinta mucaaaradka, iyagoo Saciid Deni u arko inuu yahay siyaasi aan fursad fiican u heysan in loo doorto madaxweynaha Soomaaliya, sida ay ilo-wareedyo u xaqiijiyeen Caasimada Online.
Xildhibaanada qaar oo la hadlay Caasimada Online ayaa Saciid Deni ku eedeeyey inuu soo burburiyey maamul goboleedkii Puntland ee loo dhiibay, islamarkaana uu iska hor keenay qeybaha kala duwan ee bulshada Puntland.
“Sidee ku dhici kartaa in siyaasi ku fashilmay hoggaaminta Puntland islamarkaana colaad ka dhex huriyey bulshadiisa dhexdeeda in lagu aamino masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan, runtii waxa kaliya ee aan hubo waa in xildhibaanada ay ku mideysan yihiin inay codkooda siiyaan Farmaajo intii ay cod siin lahaayeen Saciid Deni,” ayuu yiri mid kamid ah xildhibaanada laga soo doortay Puntland oo diiday inaan magaciisa adeegsano.
Sida ay qabaan falanqeeyaasha siyaasadda, Saciid Deni ayaa la rumeysan yahay inuu kaliya heli karo 20-30% codadka xildhibaanada laga soo doortay Puntand iyo Jubaland, illaa hadda lama soo sheegin codad kale oo uu ka heli karo xildhibaanada maamul goboleedyada kale.
Haddii ay wax u dhacaan sida ay falanqeeyaasha iyo siyaasiyiinta sheegayaan waxaa meeshaas ka cad inuu Saciid Deni ku hari doono wareegga koowaad ee doorashada taasoo aan niyad jab ku noqon doonin maadaama uu haddaba ogyahay inuusan halkaas dhaafi karin.